ရွှေမောင်ကို ယခုချက်ချင်းအရေးယူပေးပါ « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » ရွှေမောင်ကို ယခုချက်ချင်းအရေးယူပေးပါ
“”ရွှေမောင်ကို ယခုချက်ချင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှထုတ်ပြစ်ပေးပါ၊၊ချက်ချင်းအရေးယူပေးပါတောင်းဆိုခြင်း “”
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်( ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် )
အကြောင်းအရာ၊၊ ၊၊ ဒုချီးရားတန်း(အနောက်) ကျေးရွာ မီးလောင်သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရွှေမောင်ကို အခြေအမြစ်မရှိသော မမှန်ကန်သည့် သတင်းထုတ်လွင့်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်ထိရောက် သောတရားစွဲဆိုမှု ပြုလုပ်ပေးပါရန်တောင်းဆိုခြင်း။
ေေ ရွှေမောင်ကို ယခုချက်ချင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှထုတ်ပြစ်ပေးပါ၊၊ချက်ချင်းအရေးယူပေးပါ၊၊ ရွှေမောင်ကို နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှု၊နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊နိုင်ငံတော်္နနှင့် ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့်ကိုအကြည်ညိုပျက်စေမှု၊လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆော်မှု၊လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းဥပဒေများချိုးဖောက်မှု၊ဘာသာရေးအမုန်းတရားများဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆော်မှု နှင့် နိုင်ငံတော်္န မတည်ငြိမ်အောင်သွေးထိုးလှုပ်ဆော်မှုများကို ၄င်းကိုယ်တိုင်ပြောဆိုခဲ့သော ခိုင်လုံသော သက်သေအထောက်အထားများဖြင့် ကျူးလွန်သည်မှာ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေပါ၍ ပြင်းထန်ထိရောက် သောတရားစွဲဆိုမှု ပြုလုပ်ပေးပါရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်၊၊
ထိန်လင်း / လင်းထိန် [ Burma Democratic Concern ( BDC ) ]
မိတ္တူ – ၁၊၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊၊
၂၊၊ ရဲချုပ် ( မြန်မာ နိုင်ငံပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ )
၃၊၊ဒုရဲချုပ် ( မြန်မာ နိုင်ငံပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ )
၄၊၊တရားသူကြီးချုပ် ( မြန်မာ နိုင်ငံတော် )
၅၊၊ ရှေ့နေချုပ် ( မြန်မာ နိုင်ငံတော် )
၆၊၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်း ( ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာ )
Shwe Maung must be charged and sacked. He must be charged with treasons, rebellion, tarnishing state integrity and police force, propagating religious and ethnic conflicts, breaching code of conduct of MP, and instigating hatred and instability of the state. He has committed serious crime.
Tags: arakan, Arakanese, Aung San Suu Kyi, Burma Democratic Concern (BDC), burmese, Myanmar, rakhine, Yakhine
← Important: Arakan leaders were shot in Malaysia	A Burmese Activist, Aung Gyi Gsc, was assassinated in Malaysia →